04/01/2019 - Page 2 sur 3 -
Disadisa nahafaty olona : Lehilahy iray voasambotra
04/01/2019 admintriatra 0
Andro vitsy ihany dia voasambotry ny zandary ny tovolahy iray tompon’antoka tamin’ny tsatok’antsy, nandratrana olona iray ka nitarika fahafatesana, tany amin’ny fokontany Ahevy, kaomina Ampasimbe distrikan’i Brickaville, ny alin’ny alatsinainy faran’ny taona lasa teo. Voampanga …Tohiny
Can 2019 – Baolina kitra : Atao any Afrika Atsimo, na any Egypte
Taorian’ny nanesorana ny fampiantranoana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, amin’ny baolina kitra, eo amin’ny ekipam-pirenena tamin’i Cameroun, dia ho fantatra ny alarobia ho avy izao izay hampiantrano ny Can 2019. Nambaran’ny kaonfederasiona afrikan’ny baolina kitra …Tohiny
Tanora manan-talenta : Misokatra ny tetikasa « Lapihazo »
Zava-baovao atolotry ny Institut Français de Madagascar, na ny IFM amin’ity taona ity. Misokatra ho an’ireo tanora manan-talenta ny tetikasa « Lapihazo ». Fihaonana natao isam-bolana mba ho sehatra hanehoan’ireo tanora ny talentany amin’ny lafin-java-kanto …Tohiny
Taona 2019 : Alarobia ny ankamaroan’ny andro tsy hiasana
Manomboka ny taom-piasana ho an’ity taona vaovao ity. Milatsaka ho andro alarobia ny ankamaroan’ny andro tsy hiasana ho an’ity taona 2019 ity. Alarobia no hanamarihana ny fetin’ny asa, izay marihina isaka ny voalohan’ny volana mey …Tohiny
Lalatiana Ravololomanana : Niantso ny CFM sy HCCDDED
Nitondra ny fanahiany teny amin’ny CFM na ny filankevitry ny fampihavanana malagasy, sy ny HCCDDED filankevitra ambony ho an’ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna i Lalatiana Ravololomanana omaly. Nambaran’ny filoha mpanorina ny antoko ...Tohiny
Andry Rajoelina – Ntsay Christian : Mitovy toetra…!